Intsha nezethembiso zosopolitiki ezingafezekile - Bayede News
Isithombe: nguNic Bothman/EPA
Iminyaka engamashumi amane nesihlanu emva kosuku oluyingqophamlando langomhla zili-16 kuNhlangulana we-1976. Lolu suku seluphenduke lwaba usuku lwabantu abasha kuleli leNgabadi. Kungesilo nje lodwa kodwa inyanga yonke isetshenziselwa ukubungaza abantu abasha eNingizimu Afrika. Ngabe isimo sokuthuthukiswa kwabantu abasha sinjani kulelizwe? Ngabe sikhona isizathu sokujabula noma kumele sikhathazeke ngesimo abantu abasha abazithola bekuso? Kulesi sikhathi iNingizimu Afrika yangena ekuphathweni ngokwentando yeningi ziningi izethembiso ezinziwe kubantu baleli lizwe ikakhulukazi abantu abasha. Okumele sizikhathaze ukuthi ngabe lezi zethembiso zifeziwe yini?
Abantu abasha bayikusasa lanoma iliphi izwe ngakho-ke uma izwe lizikhathaza ngekusasa lalo kuyaphoqa ukuthi linakekele abantu abasha. Abantu abasha eNingizimu bayingxenye enkulu yezibalo zezakhamuzi zezwe. Lokhu kumele kubonakale ngendlela izinhlelo zezepolitiki ezihlelwe ngakhona. Kuleli lizwe uma sibheke izethembiso ezenziwe kubantu abasha siqhathanisa nesimo sabantu abasha kuyathusa. Singasebenzisa nje izinhlaka zezwe ezimbalwa ukubheka lokhu. Singasebenzisa uhlaka lwezemfumdo, olwezemsebenzi kanye nobubha ukubheka lokhu. Sikubheke lokhu siqhathanisa nemihlahlandlela yezethembiso zokhetho yamaqembu ezepolitiki kusukela iNingizimu Afrika ibe izwe lentando yeningi.
Mhlawumbe ngaphambi kokubheka lezi zethembiso kuyafuneka siqala ngokubheka izibalo zezwe ezithinta abantu abasha. Abantu abasha ilona qoqo labantu eliningi uma kubhekwa izibalo zezwe. Ngokwezibalo zezwe abantu abasha bangamaphesenti angama-37 ngokwenhlangano eyengamele izibalo zezwe iStatistics South Africa. NgokweKhomishini Yokhetho Ezimele i-IEC abantu abasha benza ingxenye engamaphesenti angama-41 yohlu lwabavoti eNingizimu Afrika. Lezi zibalo zisikhombisa ngokusobala ukuthi abantu kufanele babe umgogodla wezinhlelo zezepolitiki zokuthuthukisa leli lizwe. Mhlawumbe singasho ukuthi ukuthuthuka kwabantu abasha kumele kube umongo wazo zonke izinhlelo zepolitiki kuleli. Umbuzo uzothi ngabe kunjalo na?
Ziphumile izibalo ezichaza kabanzi isimo sezwe ngokwamathuba omsebenzi. Ziyethusa zona futhi zisezingeni elingakaze libonakale kuleli lizwe. Ezweni elinabantu abacela ezigidini ezingamashumi ayisithupha, abantu abangamaphesenti angamashumi amathathu nanhlanu abasebenzi. Lesi sibalo sifaka labo abangasebenzi kodwa abasakukhuthalele ukubheka umsebenzi, uma sekufakwa nalabo esebelahle ithemba lokubheka amatoho lesi sibalo sithusa kakhulu, laba bangamaphesenti angamashumi amane nanhlanu. Uma sibheke ngokwezinombolo lezizibalo zithusa kakhulu. Unyaka nonyaka,ukhetho nokhetho abaholi bezwe namaqembu ezepolitiki benza izethembiso zokwakha amathuba omsebenzi. Kepha uma sibheke izibalo zabantu abangasebenzi ikakhulukazi kubantu abasha kuyacaca ukuthi lesi sethembiso kuse kude ukuthi sifezeke. Ukungasebenzi kwabantu kuhambisana ncamashi nezinga lobubha ezweni ngakho uma leli lizwe noma abaphathi balo bengakhi amathuba umsebenzi bakha isimo sokukhulisa ububha.
Izibalo lezi zikhombisa okunye okuthusa kakhulu. Ezweni elinabantu abasha abaphakathi kweminyaka eyishumi nanhlanu nengamashumi amabili nane abayizigidi ezilishumi nezinkulungwane ezingamakhulu amabili ingxenye engamaphesenti angamashumi amathathu nambili nemfalakahlana (32.4) okuzigidi ezintathu nezinkulugwane ezingamakhulu amathathu. Lentsha ayisebenzi, ayifundi futhi ayiqeqeshelwa makhono. Ezweni elifana naleli leNgabadi lapho kuhlasele ububha, ubugebengu kanye nezidakamizwa lezi zibalo kumele zithuse kakhulu. Zonke izinhlangano zezepolitiki ziye zethembise ukulwa nalokhu kodwa ngathi kuya ngokuya kubheda kunokuthi kulunge.
Kusukela okhethweni lokuqala lwenqubo yentandoyeningi amaqembu ezepolitiki abe nezethembiso kwezemfundo. Ukwenza nje isibonelo iqembu elibusayo kuzwelonke uKhongolose,wenza isithembiso semfundo yamahhala ezweni. Noma emfundweni esemazingeni aphansi lokhu kufezeka kodwa miningi imibuzo engabuzwa. Njengokuthi ngabe izinga lemfundo nesimo salezo zikole lona linyukile na? Iqiniso lithi ezikoleni eziningi okungakhokhwa kuzo izinga nesimo semfundo kuphansi kakhulu. Izikole lezi azinazo izinsizakufunda eziningi okwenza izinga lokufunda lingafani nasezikoleni lezi ezifunda omntakabani. Mhlawumbe yikho izingane zosopolitiki kanye nothisha zingafundi kulezi zikole ngoba nabo bayazi ukuthi izinga liphansi.
Ezikhungweni zemfundo ephakeme nasemakolishi okuqeqeshelwa amakhono kunzima kakhulu. Noma uhlaka lokusisiza abafundi ngezimali zokufunda uNSFAS lukhona kodwa alwenele. Sike sibone unyaka nonyaka imibhikisho engapheli. UNgqongqoshe woMnyango Wemfundo Ephakeme uDkt uBlade Nzimande uze awubize ngomdlalo oluchungechunge. Imibhikisho le isuke ibhekene kakhulu nezinkinga zezimali zokukhokhela imfundo. Imfundo uKhongolose owathembisa ukuthi iyoba mahhala kusukela ngonyaka we-1994. Noma owayenguMengameli wezwe uMnu uJacob Zuma amemezela ukuthi sekuzoba mahhala ukufunda kubafundi abaphuma emindenini ehlwempu nasemimdenini yabantu abasebenzayo kodwa ukuqhubeka kwemibhikisho kusikhombisa ukuthi lokhu akukwenzeki ngendlela egculisayo.
Kwezomnotho namabhizinisi amaqembu ezepolitiki athembise ukuthi koba nezinhlelo ukwenza isiqiniseko ukuthi abantu abasha bathola ithuba lokulima indima kulo mkhakha. Noma zikhona izinhlelo zokwenza lokhu kube yimpumelelo kodwa ukhalo okumele luhanjwe luselude. Ukwenza nje isibonelo uhlala olubhekelele ukuthuthukiswa kwentsha kuleli sekuphele unyaka wonke lungenalo ibhodi elulengamele. Imizamo yokukhetha ibhodi leNYDA ngonyaka ofile yaze yavinjwa amaphepha asenkantolo noma ikhona imizamo kulo nyaka ophezulu, sinethemba lokuthi ngeke kuphindwe kuyiwe enkantolo. Lolu hlaka lubaluleke kakhulu ekuthuthukiseni abantu abasha.
Abantu abasha bayidingeka ezweni ukuze lithuthuke. Akukuhle ukuthi ezweni elinabantu abasebasha abaningi njengakuleli iningi labo lingakwazi ukuziphilisa. Lokhu kugcina sekwenza ukuthi iningi labo licwile ezidakamizweni nasebugebengwini. Izibalo zikhomba ukuthi baningi abantu abasha emajele. Kanti ezidakamizweni awudingi izinombolo ukwazi ukuthi zilibulele izwe. Ukuhamba nje ezitaladini zasedolobheni eThekwini noma eGoli noma ungazikhethela noma iliphi ilokishi uzibonela ngamehlo ukufa kwekusasa lezwe. Noma singeke sigxeke kuphela uHulumeni ngalokhu kodwa izethembiso zempilo engcono kanye nezethembiso zepolitiki ezingafezakanga ziyimbangela yalokhu. Uhlelo lokuthuthukisa intsha kuleli aluvezi imiphumela emihle, lona ngabe lukhona, uma lukhona ngabe luhambisana nesimo saleli lizwe?
Unyaka nonyaka leli lizwe liyahlangana libungaze usuku lwentsha. Mhlawumbe okudingekayo kulo nyaka ukuthi kuba nembizo ezokhuluma ngesimo sentsha nentuthuko yayo. Lokhu mhlawumbe kungasiza ukuthi sibona ukuthi kuzo zonke izethembiso kanje nezinhlelo ezike zenziwa azifezekanga. Abantu abasha bayakudinga lokhu, leli lizwe liyakudinga lokhu ukuze lizame ukuya phambili. Ezweni lapho abantu abasha benza amaphesenti angamashumi ayisikhombisa nane wesibalo sabantu abangasebenzi, lokhu kuyadingeka.
Yebo kuningi osekwenziwe kodwa lokhu kuncane kakhulu kunokudinga ukwenziwa ukuze ikusasa laleli lizwe libe ngcono. Isimo sabantu abasha kuleli lizwe sibi kakhulu. Kanti nezwi abanalo kuleli lizwe. Uma ubheka ukuthi kubo bonke oNgqongqoshe bezwe akekho oneminyaka engaphansi kwengamashumi amathathu nanhlanu. Ngabe abaphathi bezwe bayazazi izinto ezidinga abantu abasha noma benza lokhu abakucabangayo?
UKhongolose kumhlahlandlela wawo wokhetho ngonyaka wezi-2019 awukhombisanga ukubhekelela ngqo izinto ezithinta intsha. Akukho ngisho nalapha oveza khona ukuthi izethembiso ezazenziwa emnyakeni emihlanu engaphambili zahambe zafika kuphi.Lokhu okubeka ngokusobala ukuthi ukudlala indima ekuthuthukisweni kwabasha nokubabona bedlala indima kwezomnotho okusiyo into eseqhulwini kuKhongolose. Izibalo ke ziyakufakazela lokhu.
Iningizimu Afrika inenkinga kwezempilo selokhu kwathi nhlo kumbuso wentando indana yezempilo ezingcono iseqhulwini. UKhongolose kumhlahlandlela wawo wokhetho wangonyaka wezi-2019 ngenxa yokuhlaselwa ubhubhane lwegciwane lengculazi. UKhongolose ukunikezela ngemishanguzo kubo bonke abanaleligciwane. Inkinga kodwa ukuthi uhlaka lweNHI olulokhu lwathenjiswa eminyakeni edlulile namanje luseyiphupho. Abantu baseNingizimu Afrika basalala emabhentshini ezibhedlela zikaHulumeni ngoba bedla imbuya ngothi.
Impilo engcono kuleli lizwe isibekelwe labo abadla izambane likampomdo bese kuthi labo abadla imbuya ngothi konke okuzidingo zabo kumele bakubhikishile. Ukucabanga nje ukuthi emva kweminyaka emingaka yentando yeningi kusenimiphakathi engenayo imitholampilo. Abantu abasha abaningi ngenxa yokungabibikho kwemitholampilo nobubha bayaphoqeleka ukuphenduka abahlengikazi emakhaya.Abanye kwamanye amakhaya sekwasala bona bodwa abazali abasekho. Isimo saleli lizwe siyabaphoqa abasha ukuthi bengakuthokozeli ukuba basha.
Ziningi izethembiso ezenziwe osopolotiki namaqembu abo, ukugxila kuzethembiso zikaKhongolose kudalwa ukuthi yiwo ohole izwe kusukela kwaqala intando yeningi. Ukhetho loHulumeni Basekhaya luyeza, mhla zingamashumi amabili nesikhombisa kuMfumfu kuwo lo nyaka. Amaqembu ezepolitiki azokwenza ezinye izethembiso, umbuzo uthi ngabe bazoqala yini ngokusitshela ukuthi kwenzekeni ezithembisweni zangangaphambilini, ngaphambi kokwenza ezintsha? Abanye baye bethi iningizimu iyefana nebhomu eselizoqhuma ngenxa yezethembiso ezingafezakanga. Izimpawu zalokhu sizibona mihla namalanga emibhikishweni yezimfuno emphakathini kodwa lokhu kuhlale obala ngowezi-2015 nowezi-2016. Umkhankaso wabafundi basemanyuvesi i#FeesMustFall owawungukhululela ngoqo nanamuhla usabatshazwa. INingizimu Afrika ikwangqingetshe umgwaqo ujikela kwesokunxele noma kwesokudla. Izithembiso ezingafezakanga ziyakuliqhumisa ibhomu.
Thobani Zikalala Jun 4, 2021